प्रतिमिनेट २ करोड ८७ लाख भन्दा बढीकाे काराेबार , कसले कमाए ? कसले गुमाए ?
नेपाली शेयर मार्केटमा उच्च बिक्रिदरले उत्साह कायमै राखेकाे छ । आइतबारकाे बजारमा प्रति मिनेट २ करोड ८७ लाख भन्दा बढीकाे काराेबार भएसँगै लगानीकर्ताहरूमा नयाँ उत्साह थपिएकाे छ । कुनैबेला दिनभरीमा २० कराेडकाे काराेबार हुन गार्हाे भएकाे शेयर बजारमा आज यति धेरै काराेबार भएपछि शेयर बजार बुलिस ट्रेन्डमा अझै माथी जाने अनुमान लगानीकर्ताहरूकाे रहेकाे छ।
आइतबार २०१ कम्पनीको ६ अर्ब ९० करोड ६७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ।१ करोड ६० लाख भन्दा बढी कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएका छन् । कुल १२ समूहको कारोबार भएकामा ३ समूहका सूचक वृद्धि भएका छन् भने बाँकी समूह तल झरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्: शेयर बजारमा गर्नै नहुने १० गल्तीहरू
आइतबार विशेषगरी बैंकिङ समूहमा तेजी आएकाे छ । अरु सूचकहरुले दबाबको सामना गरे पनि बैंकिङमा भने वृद्धि देखिएको हो ।आज सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड २ का लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै १०% का दरले कमाएका छन् । यता, माउन्टेन हाइड्रो नेपालका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै ८.९३% का दरले गुमाएका छन् । खरिदबिक्री रकममा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी अग्रस्थानमा छ । यसको ५७ करोड ९१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । दोस्रोमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स र तेस्रोमा नेपाल टेलिकम परेका छन् ।
लिभरपुल र लेस्टर सिटि बिच रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा हुदैँ
पछिल्लो २४ घण्टामा आइतबार थप १ हजार ६६९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि